South Africa&apos;s president heading to Zimbabwe - The San Diego Union-Tribune
South African President Jacob Zuma will be "more vocal" than his predecessor about bringing Zimbabwean President Robert Mugabe's party to task for harassing rival politicians, a South African official said Wednesday.
Attacks by Mugabe's followers on activists of a rival party, which is now in a strained coalition in Zimbabwe, "are a hindrance to progress" in the impoverished country, said Gwede Mantashe, secretary general of South Africa's ruling African National Congress.
Zuma goes to Zimbabwe on Thursday, his first visit to the neighboring country as president. Despite unconfirmed rumors that the 85-year-old Mugabe is ill, "everything's on track" for Zuma to meet the longtime Zimbabwean ruler, Zuma's spokesman Vincent Magwenya said Wednesday.
"There are no concerns because we have not received any official communication on the state of President Mugabe's health," Magwenya said, adding that Zuma also plans to meet with opposition leader turned Prime Minister Morgan Tsvangirai, who is in the coalition with Mugabe.
Tsvangirai's Movement for Democratic Change party accuses Mugabe's ZANU-PF of stalling on reforms and continuing to attack and harass MDC activists since the coalition was formed in February. ZANU-PF says its coalition partner should be pushing harder to get the international community to lift sanctions against Mugabe and his top aides.
Magwenya portrayed Zuma's planned two-day trip as a fact-finding exercise. Tsvangirai was in Johannesburg earlier this month to describe his view of problems in Zimbabwe. Now Zuma, Magwenya said, "will get a similar brief from members of ZANU-PF, including President Mugabe."